सहकारीबाट ऋण लिँदा यी कुरामा विचार पुर्याउनुस् है ! | Nepal's No.1 Co-operative News Portal
Home सहकारी खबर [Coop News] सहकारीबाट ऋण लिँदा यी कुरामा विचार पुर्याउनुस् है !
– ऋण लिंदा संस्थाको सम्पूर्ण नियमहरु सदस्य र संस्था दुबै पक्ष बीच भएको लिखित शर्तको आधारमा मात्र लिनुहोस् ।
– तमसुकमा उल्लेख गरिएका विषयहरुमा सचेत हुनुहोस् ।
– धितोको रुपमा राखिएको घर, जग्गा संस्थाको नाममा मात्र दृष्टिबन्धक गराउनुहोस । अन्य कुनै पनि ब्यक्तिको नाममा दृष्टिबन्धक वा नामसारी गराई ऋण लिने काम नगर्नुहोस् ।
– पूर्व ऋणीसंग पनि संस्थाको ऋण सेवाको बारेमा बुझेर ऋण लिने गर्नुहोस् ।
– ऋण लिंदा संस्थासंग सबै लिखित आदिकारिक शर्त अनुसार मात्र लिनुहोस् ।
– कुनै अन्य व्यक्तिको नाममा ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्ने नगर्नुहोस् ।